Azafady Aza Mamaly ny fangatahana media sosialy amin'ity fomba ity | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 23, 2017 Zoma, Oktobra 27, 2017 Douglas Karr
Iray amin'ireo rindranasa finday tiako indrindra ny Wiktionary. Manalavitra ahy amin'ny fifamoivoizana aho, manampy ahy hisoroka loza, ary mampitandrina ahy ny amin'ny polisy mialoha - manavotra ahy amin'ny tapakila mandeha haingana raha sendra nofinofy sy nihatakataka mihoatra ny fetra aho.
Tao anaty fiara aho tamin'iny andro iny ary nanapa-kevitra ny hijanona amin'ny fivarotana sigara haka fanomezana ho an'ny namako, saingy tsy azoko antoka hoe iza avy ireo teo akaiky teo. Tsy dia nanaitra loatra ny valiny… niaraka tamin'ny fivarotana sigara 432 kilaometatra avy eo voatanisa ho “manodidina ahy”. Ka nanao izay hataon'ny mpanjifa tsara rehetra aho. Naka pikantsary aho ary nizara izany tamin'i Waze.
.@waze tena mieritreritra ianao fa tokony hitondra 432 kilaometatra hitady sigara aho? Heveriko fa tsy "manodidina ahy" izany. pic.twitter.com/lLB8pukoQm
- Douglas Karr (@Douglaskarr) Oktobra 20, 2017
Mampalahelo fa izao no valiny azoko:
Tsia! Azonao atao ny mandefa tatitra momba ny bibikely eto: https://t.co/FnxjYba2tF
- waze (@waze) Oktobra 20, 2017
Novaliako avy hatrany hoe:
Vao notateriko teto izany.
Nijanona teo ilay kofehy.
Tsy azoko antoka hoe firy ny orinasa manao an'io, fa mila mijanona izany. Raha manome vavahady mankany amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny media sosialy amin'ny mpanjifanao ianao dia tokony antenainao ny hitaterany olana amin'izany fomba izany, ary tsy maintsy omena fahefana ny olona hamaly izany.
Mpampiasa haino aman-jery sosialy 1 amin'ny 4 nitaraina tamin'ny alàlan'ny media sosialy, ary 63% no manantena fanampiana
Efa naka minitra vitsy tamin'ny androko aho satria niahy ny kalitaon'ny fampiharana aho, tsy handeha hitety pejy hafa aho, hameno vaovao marobe, ary hiandry valiny… Tiako ho fantatrao fotsiny tapaka ny fampiharana nataonao mba hahafahanao manamboatra azy.
Ny valiny lehibe dia mety ho Misaotra @douglaskarr, nitatitra ny olana tamin'ny ekipan'ny fampandrosoana izahay.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifafangatahana serivisy ho an'ny mpanjifahaino aman-jery sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa media sosialyWiktionary
Ireo tag malaza sy ilaina indrindra apetraka amin'ny ecommerce
23 Okt 2017 amin'ny 7:16 PM
Manaiky tanteraka. Efa imbetsaka aho no nanao an'io, ary mahazo valiny mahazatra aho hoe "afaka mameno tatitra momba ny bibikely ve ianao" na "afaka mandefa mailaka aminay amin'ny X" - Ary namaly toy ny nataonao ihany aho.